Muuna Miiggane. Q1aad (Sheeko Taxane ah)
By Ibrahim Aden Shire October 23, 2018
Muna maanta waa sideed iyo toban jir, waa gashaanti dhamaystiran gugii kaba ka roor iyo kalayaacii ayay ku dhalatay duleedka tuulada qax u jog, ee gobolaka Gedo. Waagay yarayd hooyadeed Saxarla Guure, waxay ka maqli jirtay gabadhayda Muna, waa falxad sanadkay dhalatay gu’ samaad buu ahaa, adhigii noo dhalay waxaruu wada dhalay, geelii noo dhalayna nirguu wada dhalay, hal mid ah na kama af qudhmin oo si fiican bay da’daasu u hana qaadday. Laakiin Muna arrintaas hooyadeed sheegtay ma hubto dhabnimadeeda wali wax mucjisa ah iskuma ay arag. Waa barqo duhur xigeen ah waxay hoos taagantahay geed Tincad ah, si qasad la aan ah ayay indheheedu laamaha geedka iyo ubaxa saaran ugu duldhacayaan. Xasuus badan ayaa maankeeda si fasax la aan ah u soo weeraraysa. Dhacdooyin badan oo muruga leh ayaa ka sheeda ka soo maaxaya, waxaase ugu daran labo dhacdo oo sigaar ah iyada u taabtay tiiranyo iyo muruga badana ku reebay midi dorraad ayay dhacday midana isbuuc ka hor. Waayahanba diyaaradaha Kenya deegaan…
Warbixin kooban: Safarkaygi Gedo
By Ibrahim Aden Shire March 20, 2019
Waxaan safar gaaban ku gaaray gobalka Gedo, gaar ahaan magaalooyinka Baladxaawo iyo Garbahaareey. Safarkaan oo qaatay inti u dhaxaysay 16/02/19-09/03/19 ayaan intiisa badan joogay dagmada Garbahaareey ee caasimada gobalka Gedo. Intii aan joogaay dagmadaas waxaan u kuurgalay horumarrada iga danbeeyay iyo waxa iska baddalay nolosha dadka.
Arrinta koowaad ee isoo jiidatay ayaa ah in magaaladu ballaaratay. Waxaa ku darmaday in ku dhow inti ay awal ahayd. Sidoo kale waxaa kobcay tirada dadka ku nool inkastoo wali aysan helin caddadki ay qaadi kari lahayd. Dadka badan ee soo buuxshay magaalada waa midkii dagganaa miyageeda. Dadkii xoola-dhaqatada ahaa ayaa soo xarooday oo ree balad noqday.
Arrintaan waxay la qabtaa dagmadu qaaradda Afrika oo ree magaaloobiddu aad u kobcayso. Bankiga adduunka ayaa ku warbixiyay, qaaradda Afrika, in dadka magaalooyinka dagayo ay kobcayaan 3.5% sanad walba. Sidoo kale Bankigu wuxuu sheegay in inta u dhaxayso 2010 iyo 2025'ka caasimadaha Afrika …
By Ibrahim Aden Shire February 23, 2019
Waxaan safar ku joogay baryahaan dagmada Garbahaareey ee gobalka Gedo. Maalinti shalay ahayd waxaa dhagtayda kusoo dhacay hadal la hayay oo Qur'aan akhris ahaa. Waxaan sheekadi ka helay in ujeedku yahay duco iyo xirsi-xir loo sameeyo soomaalida qurbaha ku nool. Waxaan jeclaystay inaan wax badan ka ogaado waxaana codsaday in maanta aan ka qayb galo Alla bariga taasoo la ii ogolaaday.
Salaaddi Casar ka dib ayaan tagay goobta la ii sheegay in muraadku ka dhacayo. Waxaan koox koox u yimid wadaaddadi ducayn lahaa. Waxaa soo xaadiray 21 wadaad oo dhalinyaro aan labaatan gaarin u badan. Waxaa la keenay cunno fudud sida bun, daango, timir iyo cabbitaanno kala duwan. Cunto ka dib waxaa naloo qaybiyay boqol boqol kun oo Soomaalli ah. Waxaana la yiri akhriya waxaad kartaan oo Qur'aan ah duceeyana. Waxaa loo duceeyay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ducadina waxaa lagu khatimay qurba-joogta oo aad iyo aad loogu duceeyay in Eeebbe dhowro iyaga iyo caruurtooda.
Waxaan codsaday in aan la kulm…
Warbixin ku Saabsan Xaaladda Gargaarka aadaninimo
By Ibrahim Aden Shire October 07, 2018
Waxaa soo baxay warbixin ka warramayso xaaladda uu ku suganyahay gargaarka aadaninimo ee dunida. Maaddaama aan nahay ummad ku tiirsan gargaarka caynkaan ah, qaar badan oo dhalinteenna ka mid ahna ay ka shaqeeyaan howlaga gargaarka waxaa ila wanaagsanaatay inaan in la wadaago qodabbada ugu muhiimsan ee warbixinta.
1: Gargaarka wuxuu ku baxaa waddamo tiro yar: 60% gargaarka bini-aadamnimo waxaa lagu bixiyaa toban waddan oo kaliya. Suuriya ayaa ugu badan oo waxay heshaa 14% waxaana labeeyo Yemen oo 8% lagu bixiyo. 7 ka mid ah tobankaan waddan waa muslimiin barax la' waxayna kala yihiin: Turki, Suuriya, Yemen, Lubnaan, Ciraaq, Urdun iyo Falastiin. Waddamada Turki, iyo Urdun dhibka laga caawiyo waa xaqootiga Suuriya kasoo barakacay. Saddexda dhimman waa Itoobiya, Koofurta Suudaan iyo Giriigga oo ah meesha Yurub usoo maro qaxootiga ka imaanayo dalalka Afrika iyo Carabta. Koongo iyo Suudaan ayaa ka baxay tobanka hore marki ugu horraysay tan 2011'ki iyo 1999'ki sideey u kala horre…
Tallaabada uu qaaday Guddoomiye Mursal waxay i xasuusisay Dhacdadii dhexmartay Rory Stewart and Mullah Mustafa
By Ibrahim Aden Shire December 09, 2018
Maanta anigoo meel aan qof ku yara sugayay taagan ayaan mobilkayga yara eegay. Waxaan furay caasimada.com wixii ugu horreeyay oo aan arkayna waxay noqdeen Mursal oo aqbalay mooshin madaxdweynaha xilka looga qaadayo. Anoo wali yaabban si fiicanna uusan warku iigalin ayaan markale furay mise waa mid kale oo dag-dag ah. Waxyaabihii loo cuskaday mooshinka ayaa lasoo qoray. Dhaqso ayaan isha u mariyay laakiin mid aan ku qanco ma arag waayo, inkastoo ay ahayeen dhammaan qodabada la keenay waxay ahaayeen kuwo aan jeclaa in marhore madaxweynaha inta loo yeero su'aalo laga waydiiyo, haddana jid sax looma marin.
Halkii la waraysan lahaa ka dibna go'aan laga qaadan lahaa sheekadi waxay ka billaabatay xil ka qaadis iyo eedaymo meeshi ugu xumayd oo ah qiyaamo qaran. Su'aalo rax-raxan ah ayaa qalbigayga isku cariiyay. Mursal miyuusan ogayn dhibka iyo wareerka siyaasadeed ee arrintaanu keeni karto? Hadii usan dan ka lahayn taasi miyusan ogayn in 184 cod loo baahanyahay si xilka looga qa…
Ma Haweenki ayaa xero-taraaray mise Raggi ayaan la socon isbaddalka Dhaqan-dhaqaale
By Ibrahim Aden Shire October 17, 2018
Waxaa aad usoo batay furrinka qoysaska Soomaaliida ee qurbaha ku nool. Furriinku wuxuu ahaa mid horay u jiray sababo kala duwan ay keeni jireen. Dhowrki sano ee noo dambeeyay waxaa sabibhi kusoo biiray mid cusub oo aan dhaqanka soomaalida ka mid ahayn. Hooyooyinka Soomaaliyeed ee haysta caruur baaluq ah haddana habaynki u baxayo casho iyo maqaayad fadhiisi ayaa si xowli ah u korodhay.
Dhaqankaan wuxuu raggi ay qabsatay ku noqday ceeb iyo wajigabax ku qasbay inuu tallaabo qaado ama bulshada dhexdeeda kuu ceebaysnaado, taasoo horseeddo furrin dag-dag ah iyo qoys burburo. Haddaba ma gabdhihii ayaa hallaabay mise ragga ayaa ka haray isbaddalka nololsha ku yimid? qormadaan gaaban ayaan isku day donta inay su'aashaas ka jawaabto.
Aadanuhu waa rabid badane. Marki uu shay helo wuxuu u baahan mid kale. Waa halkii Suubbanuhu ka yiri "aadane calooshiisa waxaa buuxiyo oo aan carro ahayn ma jiraan". Mar kale waxaa isagii yiri SCW "haddii aadane la siiyo waadi dahab ah mid kale…
Warbixin Kooban: safarkaygi Gedo Q2
By Ibrahim Aden Shire March 24, 2019
Qormadi hore waxaan kaga soo hadalnay in ree baladnimadu kobacday, dhismayaasha iyo dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada oo aan waxbarashada kasoo qaadannay. Waxay ahayd inaan ku xijiyo caafimaadka iyo adeegyada kale balse waxaa igu soo noqnoqday codsi ah inaan wax ka iraahdo ammaanka gobalka iyo waxaan soo arkay. Qodobkaas ayaan maanta gorfayn doonaa hadduu Eebbe idmo.
Gobalka waxaa laga galaa dhulka ama cirka. Inta badan magaalooyinku waxay leeyihiin garoomo diyaaradeed oo shaqeeyo. Doolow ayaa ugu caalaminsan oo duullimaad maalin walba ah leh. Baardheere iyo Garbahaareey ayaa soo raaco. Buurdhuubo iyaduna marmar waa laga dagaa haddase dib u habayn ayaa garoonkeeda ku socdo in duullimaadku hagaago ayaa suuragal ah. Cid walba oo hawada marto cabsi badan ma qabto. Laakiin haddii dhulka la maro waa howlo badan tahay.
Dadka qurbaha ka tago inta badan Mandera ayay Gedo ooga gudbaan. Xadku rasmi ahaan waa uu xiran yahay. Hasa yeeshee si caadi ah ayay la isugu gudbaa. Askarta Kiinyaanku waxa…
Libaax nimaan aqoon baa lax ka rito: Soomaalida iyo Shirakadaha ay u shaqeeyaan
By Ibrahim Aden Shire November 24, 2018
Waxaa lagu eedeeayay inay shaqaalaha u dirto shaqo tankooda ka badan, waqtiga xataa ilbiriqsiyo u xisaabiso, ilaa ay gaartay in la xisaabiyo inta daqiiqo ee ay suuliga ku jiraan. Dhibkaan lagu hayo shaqaalaha waa mid gaal iyo islaam, caddaan iyo madowba u siman yahay. Muslim…